Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhagax dhigay xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta dowladda hoose ee Xamar – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa dhagax dhigay xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta dowladda hoose ee Xamar oo aan shaqeynin muda ku dhow 30-Sano.
Munaasibad lagu dhagax dhigaayay xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta dowladda hoose ee Xamar ayaa waxaa gudoomiyaha kala qeyb galay masuuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka Benaadir iyo boqolaal kamida shacabka caasimada Muqdisho.
xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta dowladda hoose ee Xamar ayaa dhawaan lagu bilaabayaa dib u dhis si looghu adeego bulshada Soomaaliyeed.
Xaruntaan oo muhiim u ah howlaha adeeg bixinta dowlada hoose ee Muqdisho ayaa sanadihii la soo dhaafay si weyn loo dareemayay baahida loo qabo dib u howlgalinteeda.
Golaha Aqalka sarre ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo cod aqlabiyad leh Ku ansixiyay Hindise-sharuciyeedka maareynta maaliyadda guud ee dalka. "Sawirro